Imveliso - Sorrento Therapeutics
Ukwenziwa kweJudicial (Antibodies, uNyango lweSeli)
I-antibody ye-cGMP ye-state-of-the-art kunye nendawo yokuvelisa unyango lweeseli e-San Diego, CA, ekuqaleni yayiyilwe ukuba ibe yindawo yemveliso emininzi yokwenziwa kweeprotheyini ezihlambulukileyo kunye nezilwa-buhlungu ezisetyenziselwa ukusetyenziswa njengonyango. Indawo eyilwe ngokutsha ihlangabezana neemfuno ezisebenzayo ze-cGMP zokwenziwa koPhando lwaMachiza amatsha, kwaye ngoku ibandakanya izakhono zonyango lweselula.
I-Bioserv Aseptic Gcwalisa kwaye ugqibezele iZiko lokuVelisa ikhontrakthi
Ngoku inxalenye yezakhono ezingundoqo ze-Sorrento, i-Bioserv, i-cGMP intlangano yenkonzo yokwenziwa kwekhontrakthi yafunyanwa kwaye yadityaniswa. Ngamaziko / amagumbi okucoca kunye neenkqubo ezisemgangathweni ezivuthiweyo, i-Bioserv ibonelela ngeenkonzo ze-aseptic kunye ne-non-aseptic yokuzalisa / yokugqiba kuquka i-lyophilization ye-biotechnology, amashishini amayeza kunye nokuxilongwa, kunye nokubhala / ukubethelwa kunye nokushisa kwexesha elide elilawulwayo, ukugcinwa okubandayo kunye nomkhenkce.
Indawo yokuvelisa intsholongwane egazini yaseSorrento ibandakanya uphuhliso lwenkqubo kunye neelebhu zovavanyo lohlalutyo kunye namagumbi acocekileyo e-cGMP. Imisebenzi exhaswayo ibandakanya inkcubeko yeeseli, ukuhlanjululwa, ukuzalisa kunye nokugqiba iinkqubo kunye nophuhliso lovavanyo lohlalutyo kunye novavanyo lokulawula umgangatho. Eli ziko linikwe ilayisenisi yi-CA Food and Drug Branch kwaye lenze ngempumelelo amachiza kunye neemveliso zamachiza ukulungiselela ulingo lwaphambi koklinikhi, ISIGABA soku-I kunye nesiGaba sesi-II.
I-ADC Conjugation, Payload and Linker Synthesis Facility
I-Sorrento isebenzisa indawo yayo ye-cGMP yemveliso ye-Antibody Drug Conjugate (ADC) e-Suzhou, e-China, phantsi kwegama le-brand ye-Levena Biopharma. Indawo ibisebenza ukusukela ngo-2016 kwaye inokuxhasa ukuveliswa kwe-cGMP yeklinikhi yabanxibelelanisi bamachiza kunye nokudibanisa i-antibody. Ngobuchule obupheleleyo benkxaso yohlalutyo kunye nesibonelelo esixhotyiselwe ukuphatha i-API enamandla kakhulu (isolator), indawo iye yaxhasa ngaphezu kweebhetshi zeklinikhi ezingama-20 kulingo lwezonyango kwihlabathi liphela.
Uphando lweSofusa kunye neZiko lokuVelisa
I-SOFUSA yokuvelisa amandla e-Atlanta, GA ibandakanya ukuchaneka kobuchule bokwenza i-nanofabrication ecaleni kwendibano kunye novavanyo lwamacandelo esixhobo. Umsebenzi uyakwazi ukuxhasa ukwenziwa kwezixhobo zesiqhelo ukuxhasa izifundo zaphambi kweklinikhi kunye neSigaba soku-I nesesi-II solingo lwezonyango. Ukongeza, iziko lophando le-SOFUSA liyilebhu yezilwanyana ezincinci ezisebenza ngokupheleleyo kunye ne-state-of-the-art i-imaging capabilities (NIRF, IVIS, PET-CT) ukubonisa ngokupheleleyo impembelelo yokuhanjiswa kwe-lymphatic ngokubhekiselele kwiinaliti zendabuko kunye nokufakwa.
Ndwendwela isiza »